Kutheni uLawulo lweeAsethi zeDijithali liCandelo eliPhambili kwiTekhnoloji yeNtengiso yeNdalo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 27, 2014 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 UJenn Lisak Golding
Njengabathengisi, sijongana nezixhobo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa mihla le. Ukusuka kwintengiso esizisebenzelayo ukuya kwintengiso yokulandela umkhondo kwintengiso ye-imeyile, sidinga ezi zixhobo zokwenza imisebenzi yethu ngokukuko kwaye silawule / silandelele onke amaphulo ahlukeneyo esiwasebenzisileyo.
Nangona kunjalo, icandelo elinye lobuchwephesha betekhnoloji yentengiso ngamanye amaxesha engakhathalelwanga yindlela esiphatha ngayo iifayile zethu, kubandakanya imithombo yeendaba, imifanekiso, isicatshulwa, ividiyo kunye nokunye. Masijongane nayo; ngekhe ube nefolda kwikhompyuter yakho ukuze ulawule iiprojekthi kwakhona. Udinga indawo yokugcina esembindini yeqela lakho ukuze ifikelele kwaye yabelane ngeefayile eziyimfuneko ngelixa uyigcinile ilungelelanisiwe. Kungako kunjalo Ulawulo lwee-asethi zedijithali (I-DAM) ngoku licandelo elibalulekileyo kwitekhnoloji yentengiso yendalo.
Yandisa, umboneleli we-DAM ngokudityaniswa okubanzi, wenze le infographic yokuba kutheni i-DAM iyinto eyimfuneko kwintengiso ye-ecosystem, ibonisa iindlela ezahlukeneyo eziququzelela imisebenzi yethu njengabathengisi mihla le. Iziphumo ezinomdla ezivela kwi-infographic zibandakanya:
Abathengisi baceba uku Yongeza inkcitho yedijithali kulawulo lomxholo ngama-57% kwi 2014.
Iipesenti ezingama-75 zeenkampani eziphononongwe kwindawo ukomeleza amaqhinga omxholo wentengiso yedijithali njengeyona nto iphambili kwintengiso yedijithali.
I-71% yabathengisi ngoku usebenzisa uLawulo lweeAsethi zeDijithali, Kwaye i-19% icwangcisa ukusebenzisa i-DAM kulo nyaka.
Jonga i-infographic yabo kwaye ufunde ngakumbi malunga nendlela onokusebenzisa ngayo iDAM kwishishini lakho.
Ukubhengezwa: Ukwandiswa yayingumthengi wearhente yam.
tags: ulawulo lokuqukethwelulekeidamaUlawulo lwee-asethi zedijithaliulawulo lwefayilekwi-infographicidama lokuthengisaItekhnoloji yentengisoyandisa